Antony manan-danja hanesorana ny localhost avy amin'ny lisans referrer - Manaova fanatanjahan-tena
Hoy i Lisa Mitchell, Semalt Mpitantana Success Manager, raha manana tranonkala ianao, ny ekipanao dia tsy maintsy mandinika izany sy izany. Raha toa ka misy olona avy ao amin'ny ekipanao no mihazona ny dikan-teny fampandrosoana ny rindrambaiko amin'ny kaonty Google Analytics, dia voatery hikorontana amin'ny zavatra mahasosotra izy ireo
Ho fanombohana dia manohy ny fampisehoana any amin'ny Referrers ny localhost. Faharoa, ny fitondrantenan'ny tranonkalanao toy ny teboka fanoherana, ny isan'ireo pejy fijery, ny fihenam-bidy ary ny toy izany. Na izany aza, dia ho voafafa ireo metrika ireo satria raha manao fanandramana ao amin'ny tranonkala ny mpikambana ao amin'ny ekipa, dia mifangaro ny zavatra. Tsy tianao izany, moa ve ianao?
Afaka manala izany toe-javatra izany amin'ny fomba tena mora ianao - usm haller zürich. Raha ny marina, manana fomba telo ianao. Na inona na inona safidy nataonao dia tsy misy afa-tsy asa amin'ny fitsidihana vaovao. Ireo tahirin-kevitra efa misy dia mbola ho voakosoka, ary tsy afaka manao na inona na inona momba izany ianao.
Hanampy sivana iray misakana ny Google Analytics
Ny fampidirana fanasongadinana iray ao amin'ny kaonty Google Analytics anao dia ny fomba tsotra sy mora indrindra hanesorana ny rafitra tsy hampifangaro ny fitaratra. Tsy mila miditra amin'ny ekipa teknika ianao. Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy:
sokafy ny kaonty Google Analytics ary mifidiana 'Admin.'
ny endri-tsoratra dia tsindrio ny 'Filters'
nametraka sivana vaovao amin'ny fisafidianana ny 'Filtres vaovao'
mamorona ny 'Filalaovana vetivety', izay tsy hanaisotra ny fifamoivoizana amin'ny Internet amin'ny anaran'ny mpampiantrano 'localhost'.
Mariho fa mety voatery manova ny anaran'ny localhost ianao na inona na inona anaran'ny tompona eo an-toerana ampiasain'ny ekipanao. Tsara kokoa, raha toa ka misy ny ekipa fampandrosoana mizara ny tambajotrao, dia azonao atao ny manaisotra ny isa Raha tsy izany dia tsy hanjavona ny masonareo. Ampidiro tsotra izao ny sivanao mba hanafenana ny 'fifamoivoizana amin'ny adiresy IP', ary efa vita ianao.
Safidy mety izany raha oharina amin'ny fisitahana amin'ny filamatra Google Analytics. Mandehana mankamin'ny sombin-dahatsary fanamarinana ary fantaro ny fananana ID izay ampiasaina hanakanana rindrambaiko amin'ny analytics. Raha toa ka mety ho efa niova ho an'ny Universal Analytics ianao, dia ho tafiditra ao anatin'izany ianao: ga ('create', UA-98765432-1 ',' website.com ').
Mariho fa raha tokony ho ohatra example.com, dia hampiasa ny tena sehatr'ao marina ianao. Soa ihany na indrisy fa tsy maintsy miezaka amin'ny teny japoney ianao. Ohatra, mety ho voatery hampiasa fehezan-teny ifana any amin'ny code ianao. Na dia nisy aza ny filazana ny fomba tsotra, dia mitaky fanoratana code vaovao izany.
Raha mampiasa ny PHP ny tranokala toy ny WordPress dia azonao atao ny manova ilay footer izay ahitana ny Google Analytics snippet amin'ny ankapobeny. Na dia ny fahafahan'ny mpizara ho an'ny tranonkala hahafahana mandefa ny fampandrosoana na ny famokarana. Na inona na inona anefa, dia tsy afaka ny tsy mety diso ianao.
Rehefa avy nanao ireo fiovana ireo ianao, dia mila mijery raha mahomby izy ireo na tsia. Manaova fitsapana iray andro na roa taty aoriana mba hanamafisana. Mifidiana sehatr'asa mifanaraka amin'izany, iray izay tsy mampiditra ny andro mialoha ny fiovana.